လက်ရှိဈေးကွက်ထဲက အကောင်းဆုံး compact ကင်မရာ ဆယ်မျိုး – Digital Photography Myanmar
HomeCameras and Equipmentလက်ရှိဈေးကွက်ထဲက အကောင်းဆုံး compact ကင်မရာ ဆယ်မျိုး
လက်ရှိဈေးကွက်ထဲက အကောင်းဆုံး compact ကင်မရာ ဆယ်မျိုး
May 25, 2016 Jedi Cameras and Equipment 0
ဒီဆောင်းပါးမှာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ compact ကင်မရာ သုံးစွဲသူတွေကနေ စတင်လို့ ဈေးသက်သာတဲ့ bridge ကင်မရာတွေနဲ့ သမားရိုးကျ Point and shoot ကင်မရာသုံးစွဲသူတွေ အထိ ကျွန်တော်တို့ ကူညီပြီး ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ Compact ကင်မရာတွေနဲ့ Compact ဈေးကွက်ဟာ ပြောင်းလဲမှုတွေအများအပြားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွေက အခြေခံအဆင့် Point-and-Shoot ကင်မရာအမျိုးအစားတွေနဲ့ တန်းတူဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ ကင်မရာထုတ်လုပ်သူတွေက သူတို့ရဲ့ compact ကင်မရာတွေကို ပိုမိုဆန်းသစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကင်မရာတွေဖြစ်လာအောင် အာရုံစိုက်လာခဲ့ကြပါပြီ။
ကင်မရာဆင်ဆာတွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလဲ တိုးတက်လာအောင်တီထွင်ပြီး အရည်အသွေးတက်လာစေဖို့အတွက်ပါ လုပ်ဆောင်လာကြလို့ ခေတ်ပေါ် Long Zoom သို့မဟုတ် Wide aperture compact မှန်ဘီလူးတပ်ဆင်ထားတဲ့ compact ကင်မရာတွေမှာ အတိတ်ကထက်စာရင် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ exposure ထိန်းချုပ်မှုတွေ setting တွေပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ WiFi စနစ်ကလည်း မဖြစ်မနေထည့်သွင်းလာကြတာမို့ Facebook စတာတွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဖုန်းကနေတဆင့် သင့်မိတ်ဆွေတွေဆီ ကို ဝေမျှနိုင်လာပါပြီ။
ဓါတ်ပုံကို သည်းသည်းမည်းမည်း ရိုက်ကြတဲ့ ဓါတ်ပံဆရာတွေဆို အရင်တုန်းက compact ကင်မရာဆိုရင် နှာခေါင်းရှုံ့ခဲ့ကြပေမယ့် ခုခေတ်မှာတော့ အများစုက DSLR သို့မဟုတ် Mirrorless ကင်မရာတွေနဲ့ compact ကင်မရာတွေကို တလှည့်စီ သုံးစွဲလာကုန်ကြပါပြီ။ ဓါတ်ပုံပညာကို စတတင်လေ့လာသူတွေအတွက် စမတ်ဖုန်းကင်မရာကနေ နောက်တစ်ဆင့် တက်လှမ်းကြတဲ့အခါ တော်တော်လေးကို ရွေးချယ်ရ ရှုပ်ထွေးကုန်ကြပါတယ်။ zoom များများဆွဲယူလို့ရပြီး ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲ ထည့်သွားနိုင်တဲ့ ကင်မရာ နဲ့ DSLR တွေနဲ့ သုံးစွဲပုံဆင်တူတဲ့ bridge ကင်မရာတွေရှိကြပေမယ့် အများစုမှာ ဖြုတ်တပ်လို့မရတဲ့ မှန်ဘီလူးနဲ့ သုံးစွဲရလွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ စံနစ်များ ပါဝင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းရနိုင်ဖို့ အတွက် မှန်ဘီလူးလဲလို့ရတဲ့ ကင်မရာတွေ ဝယ်ဖု့ိမလိုအောင် အောက်ဖော်ပြပါ ကင်မရာလေးတွေက သက်သေပြနေပါတယ်။
၁။ Leica Q
Q က အကောင်းဆုံး compact ကင်မရာလို့ပြောလို့ရပေမယ့် အင်မတန် ဈေးကြီးလွန်းလှပါတယ်။
Sensor: Full-frame (24 x 36mm), 24.2Mp | Lens: 8 mm f/1.7 ASPH lens | Monitor: 3-inch 1,040,000-dot touchscreen | Viewfinder: Electronic Continuous shooting: 10fps | Movies: Full HD (1920 x 1080) | User level: Expert
Full-frame ဆင်ဆာတပ်ဆင်ထားတဲ့ Leica ရဲ့ compact ကင်မရာကို ဒေါ်လာ 7699 နဲ့ Amazon မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပညာဖလင်ခေတ်တုန်းက Compact ကင်မရာအများစုဟာ ယခုခေတ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် SLR တွေရဲ့ ဆင်ဆာနဲ့ ညီမျှတဲ့ ၃၅မီလီမီတာ ဖလင်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအချက်က ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ ကင်မရာတွေမှာ မှန်ဘီလူးကောင်းကောင်းရှိရင် ပုံကောင်းတွေရခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီဂျစ်တယ်ဓါတ်ပုံစံနစ်ကို ပြောင်းလဲခဲ့တာနဲ့အတူ compact ကင်မရာတွေက ပိုပိုပြီးသေးငယ်တဲ့ ဆင်ဆာလေးတွေအသုံးပြုလာရချိန်မှာ ပုံကောင်းတွေရဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ Compact ကင်မရာတွေကို full frame ဆင်ဆာ တပ်ဆင်ပြီး Leica နဲ့ SONY တို့က ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ Leica Q (Typ 116) က SONY ရဲ့ RX1 မော်ဒယ်ကို အနိုင်ယူသွားပါတယ်။
Leica Q ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်က ဈေးနှုန်းပါ၊ တခြားသောအားနည်းချက်မရှိပါဘူး။ ဈေးကြီးပေးရတဲ့အတွက် Leica Summilux 28mm f/1.7 ASPH မှန်ဘီလူး၊ 3.68 M dots ရှိတဲ့ electronic viewfinder၊ 1.04 M dots ရှိတဲ့ ၃ လက်မအရွယ် touchscreen၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းတဲ့ AutoFocusing၊ အသက်ရှုရပ်သွားလောက်စေတဲ့ ပုံရိပ်တွေဖန်တီးနိုင်တဲ့ သမားရိုးကျ ခလုပ်တွေနဲ့ ကင်မရာတစ်လုံးကို သင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သော်လည်း Q အတွက် ဈေးကွက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို Leica အနေနဲ့ အလျင်မီအောင်မဖြည့်ဆည်းနိုင်သေးပါဘူး။
၂၊ Panasonic LX100
မိရိုးဖလာခလုတ်တွေ၊ ဆင်ဆာအရွယ်ကြီးကြီးနဲ့ viewfinder ပါဝင်တဲ့ Panasonic ရဲ့ လက်ရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Sensor: Micro Four Thirds, 12.8MP | Lens: 24-75mm, f/1.7-2.8 | Monitor: 3-inch, 921K dots | Viewfinder: Yes | Continuous shooting: 11fps | Movies: 4K | User level: Expert
၁၂.၈ မီဂါပီဇယ်၊ Micro Four Thirds ဆင်ဆာ၊ 24-75 mmf1.7- 2.8 မှန်ဘီလူး ပါဝင်တဲ့ LX100 ကို ဒေါ်လာ 797.99 နဲ့ Amazon မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပညာလေ့လာသူတွေဟာ DLSR သို့မဟုတ် Compact ကင်မရာတွေကို သာမန်အားဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တချို့နေ့တွေမှာ ကင်မရာအကြီးတွေကိုအိမ်မှာသိမ်းထားပြီး အိပ်ထောင်ထဲ အလွယ်တကူထည့်သွားလို့ရတဲ့ ကင်မရာမျိုးကို လိုချင်ပြန်ပါသေးတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဒီကင်မရာလေးတွေဟာ ဆင်ဆာ အရွယ်အစားသေးသေးလေးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ CSC အရွယ်အစား Micro Four Thirds ဆင်ဆာတွေကို compact ကင်မရာကိုယ်ထည်ထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် Panasonic ဟာ ဒီလိုအပ်ချက် ကွပ်လပ် ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး မှန်ဘီလူးမှာ Aperture ring ကိုတပ်ဆင်လိုက်တာ၊ shutter dial ကို ကင်မရာကိုယ်ထည်ပေါ်မှာ တပ်ဆင်လိုက်တာ အပြင် electronic view finder ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ 4K ဗီဒီယိုရုပ်ပုံအရည်အသွေးတောင် ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ စနစ်အပြင် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ super-compact wide-aperture မှန်ဘီလူးတွေကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ LX100 ကို စတင်ရောင်းချစဉ်အချိန်က ဈေးနှုံးမြင့်မားပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဈေးကျလာနေပြီး အကောင်းဆုံးကင်မရာစာရင်းထဲမှာ ပါနေသေးပါတယ်။
၃။ Fuji X70
သမားရိုးကျခလုတ်တွေနဲ့ သာမန်ထက်အရွယ်အစားကြီးတဲ့ ဆင်ဆာ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပါ။
Sensor: APS-C, 16.3Mp | Lens: 18.5mm (28m equivalent) f/2.8 ASPH lens | Monitor: 3-inch 1,040,000-dot touchscreen | Viewfinder: No Continuous shooting: 10fps Movies: Full HD (1920 x 1080)| User level: Expert
X-series ကင်မရာတွေနဲ့အတူ Fuji က အောင်မြင်မှုအလီလီဆောင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ X-series ကင်မရာတွေထဲမှာ compact သို့မဟုတ် mirrorless ကင်မရာတွေပါဝင်ပြီး Fuji တံဆိပ်အစွဲရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေအတွက် X70 က အရွယ်အစားသေးသေးနဲ့ လိုချင်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ LX100 ရဲ့ Micro four thirds ထက် ဆင်ဆာ အရွယ်အစားကြီးတဲ့ APS-C format ဆင်ဆာ တပ်ဆင်ထားလို့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ရုပ်ပုံတွေရရှိနိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ X70 ကို LX100 ထက်ပိုပြီး အမှတ်ပေးချင်ပေမယ့်လည်း viewfinder မပါဝင်လို့ ပိုပေးလို့မရဘူးဖြစ်သွားပါတယ်။ Viewfinder သုံးရင် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ပိုပြီးလွယ်ကူစွာ ရိုက်ကူးနိုင်လို့ပါ။ သို့သော်ငြားလဲ selfie ရုပ်ပုံတွေအတွက် ရိုက်ကူးသူဖက်ကို ပြောင်းပြန်လှည့်ပေးလို့ရတဲ့ screen ကြောင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရိုက်ကူးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထပ်ဆောင်းအနေနဲ့ကတော့ Aperture ring ရယ် Shutter speed dial အပြင် exposure compensation dial တို့က သင်ဘာကိုရိုက်ကူးမလဲဆိုတာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။ full automatic စနစ်ပါပေမယ့်လည်း ဒီကင်မရာကတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေအတွက် ပိုပြီး သင့်လျော်ပါတယ်။ JPEG ဓါတ်ပုံတွေကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေတဲ့ Fuji’s Film Simulation သိမ်းဆည်းမှု စနစ်ပါရှိပေမယ့် သင်ကပိုပြီး processing အပိုင်းမှာလုပ်ဆောင်ချင်ရင်တော့ RAW ဖိုင်နဲ့လည်း သိမ်းဆည်းနိုင်မှာပါ။
4။ Panasonic TZ100
Panasonic ရဲ့ တန်ဖိုးမြင့် ခရီးဆောင်ကင်မရာမှာ တခြားသော အမျိုးအစားတူကင်မရာတွေထက် ပိုကြီးတဲ့ ၁လက်မအရွယ် ဆင်ဆာတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
Sensor: 1-inch type, 20.1Mp | Lens: 25-250mm (equivalent) f/9.1-91mm lens | Monitor: 3-inch 1,040,000-dot touchscreen | Viewfinder: Electronic Continuous shooting: 10fps Movies: 4K | User level: Beginner/Intermediate
Long zoom မှန်ဘီလူးတပ်ဆင်ထားပြီး အိတ်ထောင်ထဲ ထည့်သွားလို့ရတဲ့ compact ကင်မရာတွေကို Panasonic ကတီထွင်ခဲ့ပြီး ခရီးဆောင်ကင်မရာအမျိုးအစားလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ Panasonic ရဲ့ TZ အမျိုးအစားကင်မရာတွေက အခြားပြိုင်ဘက်ကင်မရာထုတ်လုပ်သူတွေ ဥပမာ ဆိုနီတံဆိပ် ကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ဆက်လက်အသာရနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း compact ကင်မရာရေစီးကြောင်းက ရွေ့လျားနေတဲ့အတွက် Panasonic အနေနဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ အများကြီးကြိုးစားရပါဦးမယ်။ TZ100 မော်ဒယ်မှာ ဆင်ဆာအရွယ်အစားကို တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး ကင်မရာ ကိုယ်ထည်အရွယ်အစားကို ယခင် TZ စီးရီးတွေနဲ့ မပြောင်းလဲဘဲ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကို Panasonic က အလေးထားမှုရှိကြောင်း ပြသလိုက်ပါတယ်။ ယခင် TZ70 မော်ဒယ်ရဲ့ pixel ထက် ၂.၄ ဆ ကြီးမားတဲ့ pixel ကို TZ100 မှာတိုးမြှင့်ပေးလိုက်လို့ ပိုပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို TZ100 က ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Canon ရဲ့ တန်ဖိုးသင့်ဈေးနှုန်းနဲ့ ဆင်ဆာအရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် compact ဖြစ်ပါတယ်။
Sensor: 1-inch, 20.2Mp | Lens: 24-100mm f/1.8-2.8 | Monitor: 3-inch articulating, 1,040K dots | Viewfinder: Electronic | Continuous shooting: 5.9fps | Movies: 1080p | User level: Intermediate/expert
၁ လက်မအရွယ် ဆင်ဆာတွေပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့ အတူ အရည်အသွေးမြင့် compact ကင်မရာဈေးကွက်က ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ကင်မရာတွေကို သေးနိုင်သမျှသေးအောင် လုပ်ပြီး DSLR အရည်အသွေးမျိုးအထိ ရလာအောင် ကင်မရာထုတ်လုပ်သူတွေက ကြိုးစားနေလာကြပုံမှာ Canon G5 X က အကောင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ DSLR တစ်လုံး နဲ့ တော်တော်လေး ဆင်တူပြီး electronic viewfinder တပ်ဆင်ထားတာတောင် တော်တော်လေး သေးငယ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ ရုပ်ပုံအရည်အသွေး၊ ကင်မရာပေါ်ကနေ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ခလုတ်တွေကြောင့် ဓါတ်ပုံ ဝါသနာရှင်များအကြားမှာ ရေပန်းစားလာပါတယ်။ Aperture ကျယ်ကျယ်ဖွင့်လို့ရတဲ့ Zoom lens တစ်ခုပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း အလင်းရောင်နည်းနည်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ၊ နောက်ခံကို ဝါးသွားအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။
6. Panasonic FZ1000
Bridge camera မှာ Zoom lens နဲ့ အတူ ၁ လက်မအရွယ် ဆင်ဆာကို ပေါင်းစပ်ထားတာ FZ1000 ဖြစ်ပါတယ်။ USD 535 နဲ့ Amazon မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Sensor: 1-inch, 20.1 megapixels | Lens: 25-400mm, f/2.8-4 | Monitor: 3-inch articulating, 921K dots |Viewfinder: EVF | Continuous shooting: 12fps | Movies:4K | User level: Intermediate
Compact ကင်မရာတွေအတွက် ဆင်ဆာအရွယ်အစားအကြီးတွေ ခေတ်စားလာတာချိန်မှာ Panasonic ရဲ့ FZ1000 လဲ အပါအဝင်ဖြစ်လာပါတယ်။ သက်သာပေါ့ပါးတဲ့ ဈေးနှုံးတွေနဲ့ ဝေးဝေးလံလံကို Zoom ဆွဲယူလို့ရတဲ့ မှန်ဘီလူးတွေကြောင့် Bridge ကင်မရာတွေဟာ နာမည်ကြီးလာပါတယ်။ Bridge ကင်မရာတွေမှာ သေးငယ်တဲ့ ဆင်ဆာအရွယ်အစားတွေကို သုံးနေဆဲဆိုပေမယ့်လဲ ကြီးမားတဲ့ zoom ဒီဇိုင်းကို ကင်မရာထုတ်လုပ်သူတွေက ကြိုးစားလာကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Panasonic က ပိုပြီးကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးရှိတဲ့ zoom range ကို ပါးနပ်စွာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Panasonic FZ1000 က Canon G5 X လိုပါပဲ ၁ လက်မအရွယ် ဆင်ဆာကိုသုံးထားပြီး ၄၀၀ မီလီမီတာ အထိရရှိနိုင်တဲ့ Zoom နဲ့ ညီမျှတဲ့ မှန်ဘီလူးကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီ zoom range ဟာ Bridge ကင်မရာတွေအတွက် တိုတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း နေ့စဉ်အသုံးပြုမယ့် ကင်မရာအတွက်ကတော့ အများကြီး ပိုနေပါသေးတယ်။ FZ1000 ရဲ့ zoom range နဲ့ ဓါတ်ပုံအရည်အသွေးတွေကို ကျွန်တော်တို့သဘောကြမိပါတယ် ပြီးတော့ ဈေးကလည်း တော်တော်လေး မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားမှာရှိပါတယ်။
7. Sony RX10
RX10 မှာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ မှန်ဘီလူးနဲ့ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ ဆင်ဆာပါလို့ အလွယ်တကူကြည့်ရုံနဲ့ အမျိုးအစားမခွဲနိုင်ပါဘူး။ ဒေါ်လာ 798 နဲ့ AMAZON မှာ RX 10 ကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Sensor: 1-inch CMOS, 20.2MP | Lens: 24-200mm, f/2.8 | Monitor: 3-inch tilting, 1440K dots | Viewfinder: EVF | Continuous shooting: 10fps | Movies: 1080 |User level: Intermediate/Expert
Panasonic FZ1000 လိုမျိုးပဲ Zoom range ကြီးတဲ့ မှန်ဘီလူးနဲ့ ပုံမှန်ထက်ကြီးတဲ့ ဆင်ဆာအရွယ်အစားတွေကြောင့် SONY RX10 ကို ကျွန်တော်တို့သဘောကျမိပါတယ်။ DLSR နဲ့ mirrorless ကင်မရာပိုင်ရှင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ၁ လက်မအရွယ် ဆင်ဆာအရွယ်ကို စိတ်ထဲတောင်ထည့်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် သမားရိုးကျ compact ကင်မရာတွေနဲ့ bridge ကင်မရာတွေရဲ့ ဆင်ဆာတွေထက်ကြီးမားလို့ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ကြီးကြီးမားမားသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုတော့ RX10 မှာ ရှိပါတယ် အဲဒါကတော့ 8.3x zoom range ဖြစ်ပြီး bridge ကင်မရာလို့ခေါ်လို့မရအောင် တိုလွန်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အမျိုးအစားခွဲဖို့ ခက်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ 24-200 mm မှန်ဘီလူးကတော့ အထင်ကြီးစရာဖြစ်ပြီး f/2.8 အကျယ် aperture ကို zoom ဆွဲယူချိန်မှာ မပြောင်းလဲဘဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာမျိုးဟာ compact ကင်မရာလောကမှာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ RX10 II က ထွက်လာပြီဖြစ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တွေအတွက် ငွေအများကြီးပိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မူလလက်ဟောင်း RX10 ကတော့ ခင်ဗျားလိုချင်သေးရင်တော့ ဝယ်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိပါသေးတယ်။
8. Sony RX100 IV
အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ ဆင်ဆာနည်းပညာပါဝင်တဲ့ SONY ရဲ့ compact ကင်မရာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ပါတယ်။
Sensor: 1-inch, 20Mp | Lens: 24-80mm f/1.8-2.8 | Monitor: 3-inch tilting, 1,229K dots | Viewfinder: Electronic | Continuous shooting: 6fps | Movies: 4K | User level: Expert
နာမည်ကျော် RX100 ကင်မရာ စီးရီးမှာ ၁ လက်မအရွယ် ဆင်ဆာကိုပဲ SONY က အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်လှတဲ့ ဒီအိပ်ဆောင် ကင်မရာလေးတွေမှာ ထိန်းချုပ်ခလုတ်တွေနဲ့ အရည်အသွေး ကောင်းတဲ့ ပုံအရည်အသွေးတွေကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ RX100 IV ကတော့ နှစ်ထပ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆင်ဆာနည်းပညာသစ်နဲ့ လျင်လျင်မြန်မြန်ပုံရိပ်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြသပေးနိုင်လို့ ခြေတစ်လှမ်းသာသွားပါပြီ။ ဆိုလိုချက်ကတော့ 4K အရည်အသွေးဗီဒီယို၊ အဆလေးဆယ် နှေးအောင်ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ slomo နဲ့ ၁၆ fps အထိရတဲ့ အမြန်ရိုက် burst mode တွေပါဝင်လာပြီဆိုတာပါပဲ။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် RX100 IV ကို ဈေးကြီးတဲ့ ကင်မရာတစ်ခုဖြစ်စေပြီး ဒီဆောင်းပါးရဲ့ စာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက မပါဝင်နိုင်စေပါဘူး။
9. Fuji X100T
Retro လို့ခေါ်တဲ့ ခေတ်ဟောင်းဒီဇိုင်းပုံစံ အဆင့်မြင့် compact တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ပြီး Fuji က သူ့ရဲ့ ကျော်ကြားမှုကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ Amazon မှာ စတာလင်ပေါင် 774.99 နဲ့ရောင်းနေလို့ ဈေးတော့မသက်သာပါဘူး။
Sensor: APS-C X-Trans, 16.3MP | Lens: 35mm, f/2 | Monitor: 3-inch, 1040K dots | Viewfinder: Hybrid optical/EVF | Continuous shooting: 6fps | Movies: 1080 |User level: Expert
Panasonic TZ60 ခရီးသွားကင်မရာရဲ့ ချိန်ခွင်အခြားတစ်ဖက်စွန်းမှာတော့ Fuji x100T ရှိနေပါတယ်။ လှပတယ် အသုံးဝင်တယ် ဒါပေမယ့် လူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ 35mm f/2.0 မှန်ဘီလူးတပ်ဆင်ထားတဲ့ ခေတ်ဟောင်းဒီဇိုင်းပုံစံ ကင်မရာက အရွယ်အစားကြီးမားပြီး မိရိုးဖလာ ထိန်းချုပ်ခလုတ်တွေပါဝင်တဲ့ 35 mm rangefinder ကင်မရာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေအတွက် ဦးတည် ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ Street Photography ကဲ့သို့သော ဓါတ်ပုံပညာရပ် တွေအတွက် x100T ကို ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရပြီး ဒီကင်မရာပိုင်ရှင်အများစုက သူတို့မှာ တခြား ကင်မရာအမျိုးအစားတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်နေကြပါတယ်။ Fuji Film ရဲ့ ကံကြမ္မာကို မူလပထမ X100 က ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင် ကယ်တင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ Fuji ရဲ့ ပြိုင်ဖက် ကင်မရာထုတ်လုပ်သူတွေကပါ သူတို့ရဲ့ ခေတ်ဟောင်းဒီဇိုင်းကင်မရာတွေကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရတဲ့အထိ X100 က အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
10. Canon SX60 HS
65x အထိ zoom ချဲ့နိုင်တဲ့ ဒီ bridge ကင်မရာက ဘယ်နားမှာသုံးသုံး အဆင်ပြေပြီး ဒေါ်လာ ၃၆၉.၉၉ နဲ့ Amazon မှာ ရောင်းနေပါတယ်။
Sensor: 1/2.3-inch back-illuminated CMOS, 16.1MP | Lens: 21-1365mm, f/3.4-6.5 | Monitor: 3-inch articulating, 922K dots | Viewfinder: EVF | Continuous shooting: 6.4fps | Movies: 1080 | User level: Basic/Intermediate
ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာပါတဲ့ ကင်မရာ ၄ လုံးက ဆင်ဆာအရွယ်အစားသေးငယ်လို့ ပုံရိပ်အရည်အသွေးတွေကျနိုင်တယ်လို့ စောဒကတတ်ကြပေမယ့်လည်း Canon ရဲ့ SX60 XS ကို ထပ်ပြီး ညွှန်းဆိုရဦးမှာပါ။ Panasonic ရဲ့ FZ1000 နဲ့ SONY ရဲ့ RX10 တို့က ဈေးကြီးပြီး အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ အချိန်မှာ Canon က ဒီအားနည်းချက်နှစ်မျိုးလုံးကို လေးစားဖွယ်ရာ ချိန်ညှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒီကင်မရာရဲ့ ဈေးကတော့ သက်သာပါတယ်။ 1/2.3 လက်မအရွယ် ဆင်ဆာနဲ့ အလင်းရောင်ကို များများကျပြီး စုစည်းပေးနိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားချိန်မှာ SX60 HS ရဲ့ 65x zoom ချဲ့နိုင်စွမ်းကို Nikon ရဲ့ P900 က 83x zoom ချဲ့နိုင်စွမ်းနဲ့ ရိုက်ချိုးပစ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ SX60က ဦးဆောင်သူစာရင်းမှာ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံလည်လှည့်ပေးနိုင်တဲ့ LCD, full manual control တွေနဲ့ RAW ဖိုင်တွေအသုံးပြုပြီး ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ SX60 ကတော့ bridge camera တစ်လုံးလိုပဲ ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ရော compact camera တွေရှိကြလား၊ မရှိရင်ရော ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိကြလား၊ ဝယ်ရင် ဘယ် compact ကို ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးလဲ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာရင်းထဲမှာ မပါတဲ့ ကင်မရာကို ပိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်ကင်မရာအမျိုးအစားလဲဆိုတာ အောက်မှာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါ။
ကိုးကား။ ။ 10 best compact cameras you can buy right now by techradar
Sony ရဲ့ Full-Frame FE 50mm F1.4 ZA Prime Lens
July 13, 2016 Zaw 0
Canon EOS 5D Mark IV မကြာမှီ ထွက်ရှိတော့မည်
Canon EOS 77D နှင့် EOS Rebel T7i ကင်မရာအသစ်နှစ်မျိုး ကို ထုတ်ဖော်ပြသ
February 15, 2017 Jedi 0